‘नेभरमाइन्ड’ नारच्याङ- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
मान्छेहरु संगीतलाई हृदयको झंकार मान्छन् । तर, म सोच्छु– संगीतले विचारलाई उद्वेलित गर्नुपर्छ । त्यसैले भक्ति गीत, गजल, भजन, सूफी कहिल्यै मेरो फेभरेट भएन ।
माघ १५, २०७८ रोशन शेरचन
सांगीतिक यात्रा केवल संगीतकार वा गायकको मात्रै हुन्छ भनेजस्तो गर्छन् मान्छेहरू । तर, कुरो त्यसो होइन । श्रोताको पनि आफ्नै सांगीतिक यात्रा हुन्छ । कुरो बस्, त्यो आन्तरिक हुन्छ ।
विभिन्न रुचिमध्ये कसैले संगीतलाई अटुट सहयात्री बनाएको छ भने पक्कै उसको धमिलो वा सङ्लो आरम्भ, उकाली ओराली, देउराली, घुम्ती, बिसाउने चौतारो र गन्तव्य हुन्छ । गन्तव्यपछि फेरि यात्राको निरन्तरता हुन्छ । जीवनका विभिन्न कालखण्डमा सुनेका, मन परेका, तरंगित भएका, मुग्ध पारेका, उद्वेलित बनाएका अनेकन् संगीतका भंगालाको समष्टि प्रभावलाई पर्गेल्न अत्यन्त कठिन छ । तर, कठिन भए पनि केही मानिस त्यो पर्गेल्ने जमर्को गर्छन् । यो लेख तिनै कम मानिसको लाममा उभिने एउटा प्रयास हो ।
२५ कात्तिक, २०७८ साँझ । साढे छ बजेको हुँदो हो । म ओछ्यानमा पल्टेर युट्युबमा संगीत सुनिराखेको थिएँ, युट्युबले पठाइदिएको प्ले–लिस्टमा । दायाँ भित्ताको ह्वाइट बोर्डमा गिजिरमिजर अक्षरमा थाल्नुपर्ने, सक्नुपर्ने काम र पदयात्राका सूची लेखिएको छ । चार भित्तामा ठोक्किएर प्रकाश मद्दिम छ । त्यसैको जगमा नीरवताको आयतन सघन भएको थियो । मेरो फुर्सदको समय प्रायशः युट्युबको एल्गोले तयार पारिदिएको प्लेलिस्ट सुनेरै बित्छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको युगमा पर्सनलाइज्ड प्लेलिस्ट अब नयाँ हुन छाड्यो । जनराका समूहहरू अप्सनमा देखिन थाल्छन् । बिस्तारै थाहा लाग्दै गयो, मैले धेरै मन पराउने संगीत अल्टरनेटिभ रक जनराका रहेछन् । खासमा म सबैखाले संगीत सुन्छु– पूर्वीय, पश्चिमी । लोक, आधुनिक, शास्त्रीय भन्दिनँ, तर फेभरेट भन्ने त हुन्छ ! सोचें– संगीतवरपर निर्माण भएका केही फेभरेट स्मृति सोहोरेर केही लेखौं !
संगीतप्रतिको अत्यधिक रुझान ममा कसरी पस्यो ? धेरै ठोकुवा गरेर भन्न सकिँदैन, तर केही घटना र सन्दर्भ अनुमान गर्न सकिन्छ । सर्सर्ती पर्गेल्दा गण्डकी बोर्डिङ स्कुलको वातावरण धेरै संगीतमय थियो । माछापुच्छ्रे, धौलागिरि, अन्नपूर्ण र लमजुङ सदनबीच हुने वार्षिक सांगीतिक प्रतियोगिताको विशेष रौनक हुन्थ्यो । उपल्लो कक्षाका दाइहरूले (अधिकांश हङकङ, सिंगापुर लाहुरेका छोराहरू) बजाउने गिटार र कंगोका धुन, विदेशी शिक्षक वा फादरले हामीलाई गिटारमा गीत सुनाएका घटना हाम्रो कमलो हृदयभित्र पसेको हुनपर्छ ।
नोटेसनसहितको गिटार क्लास पनि हुन्थ्यो, जसको अहिले धमिलो सम्झना मात्रै छ । सिम्पल कर्डमा बजाएको जन डेनभरको ‘कन्ट्री रोड टेक मी होम’, ‘सन्डे मर्निङ’ (गायक बिर्सें) र लियो सायरको ‘आई लभ यु मोर दन आई क्यान से’ खुब सुन्थ्यौं । छात्रावासमा सिनियर दाइहरूको बेडछेउ भित्तामा टाँस्सिएको बोनिएम, अब्बाको पोस्टरले आकर्षित गर्थ्यो । अहिले सोच्दा पोस्टरले नै मुग्ध बनाउने तहको सरल समय रहेछ त्यो । क्यालेन्डरमा २०३१ देखि २०३७ को कालखण्ड थियो । उमेर पनि काँचो, जे पनि टिप्न मन लाग्ने जिज्ञासु ।
क्याम्पस पढ्दा वकमैनले संगीतप्रतिको रुझानलाई अर्कै तहमा उकाल्यो । वकमैन त्यो समयको विस्मित पार्ने प्रविधि थियो । महँगो भएकाले किन्ने सामर्थ्य सबैसँग थिएन । त्यो धेरैभित्र म पनि पर्थें । कहिलेकाहीँ साथीसँग मागेर सुन्थेँ र अद्भुत लोकमा पुगेको अनुभव गर्थें । हेडफोन लगाएर सुन्दा टाउकोमाथिको मध्यभागबाट (टुप्पी उम्रने स्थान) संगीतको ध्वनि आउँथ्यो, त्यो वास्तवमै अचम्मको अनुभव थियो । स्टिरियो साउन्ड भएकाले त्यसो भएको रहेछ । रेडियोको सपाट साउन्ड सुनिरहेको कानमा गिटार, ड्रम र स्वर नै फरकफरक दिशा र गहिराइबाट आएको बोध हुने त्यो मेसिनप्रति म बेस्मारी आकर्षित भएँ । किशोरवयभरि ऐकान्तिकता र अन्तरमुखी स्वभावले कहिल्यै छाडेन । थपमा पोखरा र हेटौंडाको रमणीयता ! वकमैन भएको कोही न कोही मेरो साथी हुन्थ्यो (सायद वकमैन भएकैले मैले साथी बनाएँ कि ? आजकल सोच्छु) । बिटल्सको लव सङ्ग्स भोल्युम १ र २ हेटौंडाको राप्ती खोला किनारमा खुब सुनेँ ।
विश्व शेरचनबाट डाय स्टेयर्सको भर्खर निस्किएको एल्मब ‘ब्रदर इन आर्म्स’ बारे थाहा पाएँ । त्यो एल्बम धेरै पटक सुनेँ । त्यस ब्यान्डको फ्रन्ट मेन मार्क नफलरलाई तीस/पैंतीस वर्षपछि पनि अनवरत सुनिरहेको छु । ‘मनी फर नथिङ’ नागर युवाहरूमाझ अत्यन्त चर्चित भयो । एमटीभीले सहरका नागर युवा वर्गलाई भरपूर मनोरञ्जन दियो । त्यसताक रेडियो नेपालमा प्रत्येक शनिबार बज्ने माइकल चन्दको ‘म्युजिकल आवर’ ले पनि थप मलजल गर्‍यो । वन विज्ञानमा स्नातक गर्दा मित्र रामु सुवेदीको सोनी वकमैन खुब सुनेँ । कति माग्नु ? दोस्रो वर्षमा ट्याक्सीमा प्रयोग गर्ने सेकेन्ड ह्यान्डको कार स्टुरियो किनेँ र संगीत सुन्ने कर्मलाई तीव्रता दिएँ । रुम पार्टनर रवीन्द्र महर्जनले कहिल्यै ‘मलाई डिस्टर्व भयो’, ‘भोलुम कम गर्नू’ वा ‘बन्द गर्नू’ भनेनन् ।
अहिले सोच्दा साह्रै बुझ्ने रुमपार्टनर पाएको रहेछु । बब डिलनको ‘ओ मर्सी’, ब्रुस स्प्रिस्टिङको ‘टनल अफ लभ’, यु टुको ‘जोसुवा ट्री’ लगायत ‘इगल्स’, ‘बी बी किङ’ र जे जे केलको ‘ब्लुज्’ ! रजनीशको प्रवचन र कितारोको संगीत सुन्नु अर्को लत थियो । युट्युबको अहिलेजस्तो साम्राज्य थियो, त्यसबेला वकमैनको थियो । स्नातक सकेर जागिर गरेपछि भने वकमैन किनेँ । सुन्ने तीव्रता झन् बढ्यो । जागिरको राम्रै अंश क्यासेट पसलमा जान्थ्यो । यो क्रम २०४५ देखि २०५४ सम्म राम्रै चल्यो ।
पुस्तक अलि सचेत भएर किनिन्छ, पढिन्छ । संगीतको हकमा त्यसो नहुने रहेछ । निःशुल्क प्लेलिस्ट आउँछ– बजायो, अन्य काम गर्दै गयो, पृष्ठभूमिमा संगीत बज्दै जान्छ । स्कुल, क्याम्पस, रेडियो नेपालको म्युजिकल आवर, नेपाल टीभीमा भूषण दहालले सञ्चालन गर्ने ‘सन्डे पप’ हुँदै विभिन्न क्यासेट ! मखन गल्लीमा पैसा तिरेर कन्सर्ट हेरेका दिन र अहिलको युट्युब संसार जोड्दा श्रोताका रूपमा मेरो संगीत–सहयात्रा अचाक्ली छ्यासमिसे छ । जन डेन्भर, डन विलियमजस्ता लोकगायकदेखि ल रिडको भल्भेट अन्डरग्राउन्ड र सेक्स पिस्तोलजस्तो पंक ब्यान्डदेखि निर्भाना, पर्लजामजस्तो ग्रन्ज ब्यान्ड ! नुसरत अली फत्ते खाँको सूफी संगीत, किशोर कुमारको रोमान्टिक गीतदेखि बब डिलनको लोक रक अटाउँछ त्यहाँ– रोलिङ स्टोन, क्विन, टिना टर्नर, एसीडीसी, गन एन्ड रोजेज, ब्याड कम्पनी, वन जभी, ट्राभलिङ विलवरी, जिम मरिसन, बब मार्ले, पल साइमनदेखि हाम्रै दीप श्रेष्ठ, अरुण थापा र नेपथ्य ! ब्लुज् जनराका धेरै नभए पनि आधा दर्जन नाम होलान् । रेडियो नेपालमा बज्ने सुगम संगीतको अध्याय त छँदै छ । एफएम युगभन्दा अघि सबै नेपालीको साझा स्टेसन त्यही थियो, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म । सांस्कृतिक क्षेत्रको त्यो हदको रेखीय फम्यार्ट अहिले सोच्दा विचित्रको लाग्छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा मेरो सांगीतिक रुचिलाई एक वाक्यमा जीवरिश भन्न सकिन्छ ।
स्नातक भई जागिरमा जोमसोम जाँदा पच्चीस/छब्बीस वर्षको अल्लारे ठिटो थिएँ । मुस्ताङको सुक्खा र बंजर ल्यान्डस्केपमा बाल्यकालीन स्मृति किरिङमिरिङ आइरहन्थ्यो । बाल्यकालका केही वर्ष जोमसोममा बितेको थियो मेरो । जोमसोममा बैंसका निहुरिएका मादक हाँगा नियाल्दै कालीगण्डकीको बतास ओढेर आरईएम धेरै सुनेँ– आरईएमको एल्बम, ‘आउट अफ टाइम’ र ‘अटोमाटिक फर द पिपल’ । गिटारप्रधान संगीत, अनेकार्थ शब्दरचना र माइकल स्टिपको अद्भुत स्वरमा हेलिएँ । कालान्तरमा थाहा भयो– गिटार बेस्ड संगीत मलाई बढी रुच्दो रहेछ ।
नेपथ्यमा गिटार बेस्ड संगीतमा मेरो स्वाभाविक रुचिका केही कारण रहेछन् । सानैमा गिटार देखेको, स्कुलमा दाइहरूले कहिले बजाइ भ्याउलान् र झ्याङ–झ्याङ पारुँला भनेर पर्खेको, पहिलो तलबले गिटार किनेको, किशोर कालमा तीन स्थानमा गिटार सिकेको ! कर्कश संगीतभन्दा पृष्ठभूमिमा गिटार, ड्रम बजोस् र स्वरले संगीतको अग्र भाग ढाकोस् । आरईएम, निर्भाना, पर्ल जाम, स्म्यासिङ पमकिङ, मिडनाइट अयल, यु टु, भल्भेट अन्डरग्राउन्ड ब्यान्ड दोहोर्‍याई तेहेर्‍याई सुनेँ । अल्टरनेटिभ रकमा मात्र सीमित भइनँ म । बब डिलन, ब्रुस स्प्रिस्टटिङ, मार्क नफलर पनि उत्तिकै सुनेँ ।
डिलनको प्रतिरोधी चेतनाबाट राल्फालीहरू प्रभावित थिए भन्ने राल्फालीको अन्तर्वार्तामा पढेको थिएँ । औद्योगिक क्रान्तिको यान्त्रिकीकरणले गाँजेपछि पश्चिमा युवाहरूले जुर्मुराउँदै संगीत, कला र साहित्यको सहारा लिएको बुझिन्छ । एलेन गिन्सवर्ग, ज्याक केरुअकलगायतका बिट कविहरूले डिलनलाई गहिरो प्रभाव पारेका थिए । हाम्रोमा कवि ईश्वरवल्लभ बिट कविहरूबाट केही हदसम्म प्रभावित रहेको मैले भेटेको छु ।
गिन्सवर्ग, केरुअक, फर्लेघट्टी, विलियस वरोजका नाम र सन्दर्भ वल्लभ दाइका लेखमा दोहोरिरहन्थे । पञ्चायती शासनको निरंकुशताको विरोधमा राल्फालगायतका प्रतिरोधी संगीत हामीकहाँ पनि सृजना भयो । नित्सेको आत्मप्रलापलाई पनि जागरण धुनमा लिपिबद्ध गरेका रहेछन् राल्फालीहरूले । राजनीतिक र भौगोलिक सिमाना अस्वीकार गरी प्रतिरोधी चेतनाका आत्माहरू निर्बाध हिँडडुल गरिरहन्छन् । भूतमा त्यो भएको थियो । वर्तमानमा पनि त्यस्तो देखिरहेका छौँ । त्यसैले भन्न सकिन्छ, भविष्यमा पनि यस्तो भइरहनेछ ।
अल्टरनेटिभ रक कस्तो जनरा हो ? यसका प्रवृतिगत विशेषता के हुन् ? भन्न कठिन छ, तर केही अनुमान गर्न सकिन्छ । सन् सत्तरीमा प्रारम्भ भएको यो जनरा असीको दशकमा उत्कर्षमा पुगेको थियो । संस्थापनसँगको पुस्तागत मतभेदलाई (नन कन्फमिर्टी) सायद अल्टरनेटिभ रकको आत्मा मान्न सकिन्छ । मूलधारले संगीतलाई वस्तुकरण गर्ने प्रवृत्ति र संगीत कम्पनीले गर्ने प्रचारको तामझामविरुद्ध त्यो लक्षित थियो । मूलधारको संगीतलाई नकार्दै बरु साना तथा स्वतन्त्र उत्पादक (लेबल) मार्फत श्रोतामा पुग्ने यिनले आग्रह राखे । कतिपय सांगीतिक ब्यान्ड त चर्चामा आउन नचाहने मात्र होइन, बरु आफ्ना खास स्रोतमै सीमित भई अन्डरग्राउन्ड बस्न रुचाए । निर्भाना, पर्ल जाम सबै प्रारम्भमा अन्डरग्राउन्ड ब्यान्ड थिए । तर, अन्टरनेटिभ रकलाई परिभाषित गर्ने क्रममा देखा पर्ने मसिना भिन्नताहरू (नुआन्स) बारे संगीतज्ञ, गायक, रेकर्ड कम्पनी र स्कलरबीच मतान्तर छ ।
घोडेपानीमा जागिरे छँदा हामी बस्ने ‘नमस्ते होटल’ को मालिकका छोरा नरेनले निर्भानाको संगीत गाएर पर्यटक दंग पार्थे । नरेन वास्तवमै राम्रो गिटार बजाउँथे । कति टुरिस्ट त रोकिएर, सुनेर र प्रशंसा गरेर जान्थे । केही टुरिस्टले बजाउँथे पनि । लालीगुँरासको घना जंगलले घेरिएको त्यो सुनसान देउरालीमा तीन खालको ध्वनि मात्र सुनिन्थ्यो– पोखराबाट जोमसोम उड्ने जहाज, खच्चडको घण्टी र नरेनको गिटार । जंगल र खोंचमा प्रतिध्वनित भएर गिटारको ध्वनि पनि चर्को सुनिन्थ्यो । हामी संगीतकै कुरा गर्थ्यौं । नरेन भन्थे– ‘दाइ निर्भाना सुन्नू है, दामी छ ।’ पोखरा झरेको मौका पारेर महेन्द्रपुलमा निर्भानाको एल्बम ‘नेभरमाइन्ड’ (१९९१) किनेँ । त्यसका अल अपोलोजिज, द मेन हु सोल्ड द वर्ल्ड, कम एज यु आर, पोली, लिथियमलाई घोडेपानी, सिख, घारा, नारच्याङ फिल्ड भ्रमणमा अत्यधिक सुनेँ ।
मेरो डार्क कालखण्डमा निर्भानाको डार्क संगीतको संयुक्ति निकै मिलेको थियो । विरेचन पनि प्रशस्त भयो । समूहमा हुन्थ्यौं फिल्ड जाँदा– कमल थापा, लक्ष्मी पुन र म । कहिलेकाहीँ ओम दाइ हुन्थे । म प्रायः बाटामा वकमैनमै मग्न हुन्थेँ, आफ्नै संसारमा । अनुभव भन्छ– आफ्नै संसारमा रम्नेहरू एकहोरो हुन्छन् । एकहोरो जीवन एकांगी बन्ने सम्भावना बढी हुन्छ र त्यसबाट बच्नुपर्छ । निर्भाना सुन्दा म सधैं फेरि १९९५, १९९६ तिरको घोडेपानी, घान्द्रुकको स्मृतिमा पुग्छु । ती स्मृतिमा जान आजकल धेरै मन लाग्दैन । वास्तवमा विगतका वैयक्तिक रुचिका कुराहरू त्यति गर्न मन लाग्दैन । तर, यद्यपि जंक यार्डजस्तो त्यो अवचेतनमा प्रवेश गर्ने हो भने अनेकन् लेख लेखिन्छन् ।
त्यसबेला सुनेको एउटा ब्यान्ड भने जलवायु परिवर्तनको सन्त्रास बढिरहेको अहिलेको समयमा झन् सान्दर्भिक पाउँछु– ‘मिडनाइट अयल’, एक अस्ट्रेलियन ब्यान्ड । एल्बम ‘डिजेल एन्ड डस्ट’ (१९८७) त्यति नै बेला धेरै अपरम्परागत लागेको थियो । यो लेख लेख्दा फिल आओस् भनेर फेरि त्यो एल्बम सुनेँ, करिब पच्चीस वर्षपछि । पर्यावरणीय ह्रासबारे चिन्ता गरेर गाइएको ‘धरती जलिरहेको छ’ (बेड्स आर बर्निङ) अत्यन्त लोकिप्रय भएको थियो । ‘मिडनाइट’ पृथ्वीको भविष्यकै चिन्ता गर्ने सामयिक ब्यान्ड हो । ‘बेड्स आर बर्निङ’ मा, अस्ट्रेलियन कविला समुदायको जीवन पद्धति, डेजर्ट ल्यान्डस्केप र त्यहाँको वनस्पति जोगाउनुपर्ने सांगीतिक आग्रह छ :
पर जहाँ नदी टुंगिन्छ / ब्लड उड र डेजर्ट ओक
होल्डन रेक र बोइलिङ डिजेल/ पैंतालीस डिग्रीमा उम्लिरहेको भेटिन्छ
कसरी नाच्न सकिन्छ / जब पृथ्वीको सन्तुलन भत्कँदै छ ?
कसरी सुत्न सकिन्छ / जब हाम्रो धरती जलिरहेको छ ?
मान्छेलाई राम्रा–राम्रा संगीतभन्दा पनि बाल्यकाल वा किशोरकालमा सुनेको गीत मन पर्दो रहेछ । कालसँग नजोडिई संगीत आउँदैन । कुनै पनि संगीतले सुन्नेलाई पहिलोपटक सुन्दाको त्यो क्षण, जोडिएको पात्र, घटेको सन्दर्भ र अझ बृहत्मा सांस्कृतिक पर्यावरणको झल्को दिन्छ । म कसरी अपवाद हुन सक्छु ? पटकपटकको प्याटर्न अवलोकनबाट मलाई केचाहिँ थाहा भयो भने म अडियोपर्सन रहेछु, भिजुअल होइन ।
चाक्षुक कलाका विधाहरू नाटक र सिनेमा मलाई संगीतको तुलनामा कम मन पर्छन् । संगीतले प्रदान गर्ने तहको ऊर्जा अन्यमा पाउँदिनँ । संगीतलाई धेरैले हृदयको झंकार मान्छन्, तर मेरा निम्ति संगीतले विचारलाई उद्वेलित गर्नुपर्छ । त्यसैले भक्ति गीत, गजल, भजन, सूफी मेरो फेभरेट कहिल्यै भएन । मनभन्दा आँखा लोभी हुने युग छ । कर्पोरेट पुँजीवादले यसैलाई संस्थागत गरिरहेको छ । चकाचौंधको दुनियाँ आखिर आँखाको रमिता मात्रै न हो ! त्यसले न आत्मालाई शान्ति दिन्छ, न मस्तिष्क उद्वेलित बनाउँछ ।
फोहोरेको थैलामा बोक्छु म मानह्याटनलाई
जसमा ल्याटिन भाषामा लेखिएको छ
अरूको हित चिताउनुजस्तो अपजस अहिलेको समयमा केही छैन !
– ल रिड, भल्भेट अन्डरग्राउन्ड
प्रकाशित : माघ १५, २०७८ १०:०८
भत्काऊ साहित्यका सीमा
अग्रजले तोकिदिएको सीमा भन्नुको अर्थ के ? सीमा भत्काउनु के अग्रजको अपमान गर्नु हो ? एप्रोचमा कमजोरी रहे, उठान बिग्रन्छ र सत्यको नजिक निचोडलाई लैजान सकिँदैन । एप्रोच सही भएको कसरी थाहा पाउने ? निःसन्देह त्यो कठिनतम प्रश्न हो ।
कोही अग्रज हुँदैमा, लोकप्रिय हुँदैमा, केही पुस्तक निस्कँदैमा, ऊ सधैं सही हुँदैन । यो विन्दुमा हामीले विश्वास गर्ने समयमा हो, पात्रमा होइन ।
भाद्र १२, २०७८ रोशन शेरचन
पृष्ठभूमिको कथा यो निबन्ध कसरी लेखियो ? किन लेख्न प्रेरित भएँ ? त्यसपछिल्तिर एउटा कथा छ । तपाईंलाई त्यतातिर लैजान्छु । साउन १६ गते शनिबार, ‘फरकधार’ अनलाइनमा पाका आख्यानकार नयनराज पाण्डेको एउटा अन्तरवार्ता छापिएको थियो । अन्तरवार्ताको शीर्षक थियो, ‘अग्रजलाई सम्मान गर्नुस्, तर तिनले तोकिदिएको सीमा भत्काउनुस् ।’
त्यस विचारमाथि सामाजिक सञ्जालमा पक्ष–विपक्षमा विभिन्न कोणबाट प्रतिक्रिया आए । अन्तरवार्तामा अधिकांश रुटिन प्रश्न सोधिएका छन् । जस्तो, नयाँ पुस्तालाई तपाईंको केही सल्लाह छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा पाण्डेको जवाफ छ— सल्लाह अरूको सुने पनि आफ्नै विवेकमा भर पर्नुस् । अग्रजको सम्मान गर्नुहोस्, तर तिनले कोरेका सीमाहरू भत्काउनुस् ।
अन्तरवार्ता र व्यक्त प्रतिक्रिया पढेँ । मनमा लाग्यो, ‘यो विषयमा अलि लामै लेख्नुपर्ला । र, यस विषयमा विविध कोणबाट प्रशस्त तर्क–वितर्क भएको राम्रो । त्यस्ता तर्क–वितर्कले सुल्झेको धारणा बनाउन लेखक, पाठक दुवैलाई सघाउँछ । आफ्ना अनुभव र विचारहरू किन नलेख्ने ?’ यिनै तर्कना यस लेखको रचनागर्भ बन्न पुग्यो ।
प्रश्नलाई कसरी लिने वा बुझ्ने ? त्यो जहिल्यै निर्णायक महत्त्वको हुन्छ । उदाहरणका रूपमा, यहाँ सीमालाई कसरी बुझ्ने ? अग्रजले तोकिदिएको सीमा भन्नुको अर्थ के ? के अग्रज लेखकले लेख्दा सीमा तोक्छ ? अग्रजको सीमा भत्काउनु भनेको के उसको अपमान गर्नु हो ? एप्रोचमा कमजोरी रहे, उठान बिग्रन्छ र सत्यको नजिक निचोडलाई लैजान सकिँदैन । एप्रोच सही भएको कसरी थाहा पाउने ? निःसन्देह त्यो कठिनतम प्रश्न हो । केही आधारको संपेक्षमा त्यो हेर्न नसकिने होइन । प्रथम, एप्रोच विज्ञानसम्मत् छ/छैन ? यौटा मापन यसलाई बनाउन सकिन्छ । त्यसको अर्थ कार्यकारणलाई आधार बनाउने । दोस्रो, इतिहासमा यी र यस्ता प्रश्नको निरूपण कसरी भएको थियो ? वा निरूपणको प्रयास के कस्ता थालिएका थिए ? यद्यपि इतिहास नियाल्ने क्रममा वस्तुनिष्ठतालाई कायम गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती छ ।
प्रतिक्रिया हेर्दा एक कोणका लेखकले साहित्यलाई भौतिक पूर्वाधार जसरी बुझेको देखिन्छ । साहित्यको एउटा स्थिर र स्थूल संरचना हुन्छ, त्यसको सीमा घरको बान्नो जसरी प्रस्ट देखिन्छ । र, बारीको डिल वा त्यो बान्नो जसरी नै सीमा भत्काउने हो भनेर बुझेको देखिन्छ । सीमा भत्काएपछि, अग्रजलाई सम्मान गरेको कहाँ ठहरिन्छ ? कसैले कडा प्रतिक्रिया पनि लेखेका छन् ।
साहित्य मानसिक निर्मिती (मेन्टल कन्स्ट्रक्ट) हो, भौतिक संरचना होइन भनेर स्विकार्दा बहसलाई तर्कसंगत हिसाबले अघि बढाउन मद्दत पुग्छ । नत्र बहस वादविवादमा फेरिन बेर लाग्दैन । यद्यपि पाठमा निहित विचारको भौतिक अस्तित्व (आयामेली वस्तुता भन्थे) नहुने होइन, तर ती पनि समयक्रममा बदलिरहन्छन् । तैपनि, पहिलो तहको (फस्ट अर्डर) वर्गीकरणमा, साहित्य मानसिक निर्मित हो ।
दोस्रो, साहित्य विचार र कलाको योग हो । संयुक्ति हो । कुन प्राथमिक, कुन परिधिको ? कुन परिवर्तनशील, कुन अपरिवर्तनीय ? कुन र कस्तो अनुपात र प्रवृत्तिमा विचार र कलाको संयुक्ति ? सौन्दर्यशास्त्रले निरूपण गर्ने विषय हो ? त्यो पर्गेल्ने हैसियत मेरो छैन । तर, यहाँ भन्न खोजेको साहित्य विचार र कलाको संयुक्ति हो भन्ने अवधारणालाई स्विकार्ने हो भने त्यसको अर्थ हुन्छ— साहित्यमा यी दुई पक्ष सर्वाधिक महत्त्वको हुन्छ । कुन विषयवस्तु, सन्दर्भ र सोच छनोट गर्ने ? विचारको पक्ष । कस्तो शैली, वाक्यसंरचना र शिल्पी बुनेर विचार अभिव्यक्त गर्ने ? कलाको पक्ष ।
पारिवारिक पृष्ठभूमि, स्कुल, स्कुलिङ, जीवन भोगाइ र अनुभवबाट प्राप्त सिकाइको आधारमा लेखकको विचार बन्दै जान्छ । लामो समय लिँदै विचार निर्माण हुने शृंखला निरन्तर चलिरहन्छ । त्यसैले लेखकका विचार र सोचहरू असमान हुनु स्वाभाविक हो । विपरीत हुनु पनि । साहित्यको एउटा अयवय विचार हो भनेर स्विकार्दा विचारको सीमा हुन्छ भन्ने पनि सँगै स्विकारिन्छ । ‘विचारको सीमा हुन्छ’, यो धारणा होइन, तथ्य (फ्याक्ट) हो । हामीलाई हेक्का होस्, नहोस्, त्यो बेग्लै पक्ष ।
के लेखकले सीमा तोक्दै लेख्छ ? लेखकले सीमा तोक्छु भनेर लेख्दैन । लेखकलाई मन वा मस्तिष्क उद्वेलित गर्ने विषयवस्तु वा विम्ब प्रस्फुटित भएपछि लेख्छ । सीमा तोक्छु भनेर नलेख्दा पनि उसले लेखसँगै लेखका सबलता, दुर्बलता, सामर्थ्य र सीमा पनि सँगै लेखिरहेको हुन्छ । लेखकको क्षमताको दायरा हुने, तर लेखनको दायरा नहुने, त्यस्तो सम्भव छैन । समर्थ समालोचकले पाठको सीमा देख्छ, इतिहासको सापेक्षमा । विज्ञानसम्मत छ छैन ? त्यसको सापेक्षमा !
वा समालोचनाका विधिपद्धतिको सापेक्षमा । लेखक स्वयम्ले आफ्नो सीमा नदेख्नु स्वाभाविक हो । उसले गर्ने सृजनात्मक लेखन (क्रियटिभ राइटिड) हो । वस्तुनिष्ठ समीक्षा चेतना नहुँदा सीमा देखिँदैन । लेखकको हकमा त्यो सुविधा छ । तर, समालोचकको हकमा उसले गर्ने समीक्षात्मक लेखन (क्रिटिकल राइटिङ) हो । त्यसले सीमा देख्छ, देख्नुपर्छ । सीमा मात्र किन, त्यसको शक्ति र सामर्थ्य पनि सँगै देख्नुपर्छ । क्रिटिकल राइटिङ त्यसैले दुष्कर कर्म हो । सीमा जुन रूपमा छ, त्यही रूपमा (एज इट इज्) देख्न सक्नु कठिनतम कार्य हो ।
नेपाली साहित्यले वस्तुनिष्ठ समालोचकको बलियो टेवा पाउन सकेन । समालोचनाको आधारभूत सिद्धान्त छ : गुण र दोषको आधारमा कृतिको निरूपण गर्ने । हाम्रामा उल्टो भयो । कोही समालोचक गुण मात्र देख्ने । मानौं समालोचना भनेको माया जताउने क्षेत्र हो । कोही दोषैदोष देख्ने । यस्तो एकांगी पद्धति साहित्यमा संस्थागत भएपछि साहित्य कसरी बलियो हुन्छ ? समीक्षकको यस्तो मन्द विष पिएर हुर्केपछि, लेखकको यात्रा पनि धेरै अगाडि बढ्दैन ।
अन्तरवार्तामा लेखक पाण्डेलाई सोधिएको छ, कस्तो देख्नुहुन्छ, अहिलेको नेपाली आख्यान ? उहाँको जवाफ छ— मैले आफ्नो ठाउँमा उभिएर हेर्दा स्थिति राम्रो देख्छु । तर, कुरा मेरो हेराइको हैन । हामीले लेखिरहेको साहित्यको समुचित समालोचना खासै भइरहेजस्तो लाग्दैन । जिम्मेवार समालोचनाले मात्रै हाम्रो लेखनको हैसियत बताउन सक्छ ।
उक्त जवाफमा म पूर्ण सहमत छु । लेखकलाई आफ्ना सृजना वा जनराको स्थिति राम्रो र सन्तोषजनक नै लाग्छ । तर, गम्भीर समालोचकहरू के भन्छन् ? त्यो पो महत्त्वको हो । नयनराज पाण्डेजस्ता पाका लेखकलाई समुचित समालोचनामा खट्किएको कुराले धेर थोक संकेत गर्छ ।
विगतमा केही विचारहरूलाई निकै अन्धानुकरण गरिएछ । ठूलो विचारभन्दा पनि एउटा सन्दर्भको उदाहरण । २०४५–४७ सालतिर म आयामेली आन्दोलनका एक प्रवर्तक कवि ईश्वरवल्लभ दाइकहाँ पुगिरहन्थें । भेटमा धेरै प्रश्न सोध्थें । त्यसताका कम्प्युटर उदाउँदो मेसिन थियो । त्यसको प्रयोग आम भइसकेको थिएन । नाम मात्र सुनेको, तर प्रयोग गर्न नपाएकाले मभित्र त्यस मेसिनको एउटा कस्तो–कस्तो कल्पना मात्रै थियो । एक भेटमा दाइसँग मेसिन र मान्छेबीचको सम्बन्धबारे कुराकानी हुँदा दाइले चिन्ता प्रकट गर्नुभयो, ‘कम्प्युटरले कविता लेख्न थाल्यो भने कविको अवस्था कस्तो होला ?’ ‘कम्प्युटरले कविता लेख्ला, तर त्यसले मान्छेले जस्तो कविता लेख्न सक्दैन’, उहाँले थप्नुभयो । मान्छेको अस्मितामै ठूलै जोखिम आउने त्रासले म पनि दाइसँगै चिन्तित बनेँ । त्यही विषयमा ‘मस्तिष्कहरूको मृत्युमा’ निबन्ध पनि लेखेँ— कम्प्युटरले कविता लेखेको भन्दा कविले कम्प्युटरमा कविता लेखेको कति युगसुहाउँदो छ । कविहरूले मै हुँ राष्ट्रियता र संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने भन्दै कागजमै कविता मात्र लेख्न थाले भने कुनै दिन प्रतिस्पर्धावश कम्प्युटर आफैंले लेख्छ अनि कविता पहिलो पटक प्रविधिसँग पराजित हुनेछ र त्यसको भागीदार कविहरू हुनेछन् । (पृष्ठ ३०, मस्तिष्कहरूको मृत्यु) ।
अहिले यी पंक्ति पढ्दा हाँसो उठ्छ । कस्तो अन्योलग्रस्त बनेछु । कम्प्युटरले आफ्नै बलमा कविता लेख्छ भनेर मैले कसरी सोचें ? वा कम्प्युटरजस्तो प्राविधिक विषयमा आधारभूत जानकारी नभएको मैले वल्लभ दाइको (प्राविधिक विषयमा उहाँको पनि आधारभूत ज्ञान थिएन) कुरालाई किन पत्याएछु ? उहाँका लेखबाट प्रभावित भएकाले जुनसुकै क्षेत्रमा उहाँका विचारलाई आँखै चिम्लेर पत्याएछु । र, पत्याएछु मात्र होइन, निबन्धकै रूप दिएछु । त्यस विचारको भत्किएको सीमाको साक्षी म स्वयम् हुँ । भत्कँदाका ध्वनिहरू भने यी पंक्तिसम्मै आइपुगेको छ । पक्कै त्यही कारण ईश्वरवल्लभ दाइप्रति मेरो आदरभावमा कमी आएको छैन । जीवनको एउटा मोडमा उहाँबाट प्राप्त स्नेह मेरो स्मृतिमा सदैव भेट्छु । तर, सिकाइ के भन्दा– कोही अग्रज हुँदैमा, लोकप्रिय हुँदैमा, केही पुस्तक उसका निस्कँदैमा, ऊ सधैं सही हुँदैन । अहिलेको विन्दुमा मलाई लागेको, हामीले विश्वास गर्ने समयमा हो । पात्रमा होइन ।
विचारहरू परिवर्तन भइराख्छन्, त्यसैले विचार सापेक्षिक हुन्छ भनिएको हो । अन्य कारण होइन । परिवर्तन नहुँदा विचारको मृत्यु हुन्छ । कारण त्यसले समसामयिकता गुमाउँछ । विचारले स्वयम्लाई पुनर्जन्म दिने नै परिष्कारबाट हो । जसरी नबग्दा खोला मृत बन्छ । त्यसकै समानान्तरमा विचार पनि गतिशील भएर मात्रै बाँच्छ । गतिशीलता त्यसको रोकिए कसैगरी त्यसलाई बचाउन सकिन्न । त्यसैले विज्ञानसम्मत चेतना अनिवार्य छ । कार्यकारण सम्बन्ध त्यसैले साहित्यको संकथनमा अन्तरनिहित हुनुपर्छ ।
अन्य अनुकरणीय अभ्यास
साहित्य, कला, संगीत, सिनेमा समीपवर्ती विधा हुन् । एउटा विधाले अर्कोबाट सिकेर आफ्नो विधालाई समृद्ध बनाउन सक्छ । यसै सन्दर्भमा सिनेमा क्षेत्रमा प्रचलनमा रहेको क्रिटिक च्वाइस अवार्डबाट साहित्यले केही सिक्न सक्छ । बढीभन्दा बढी दर्शकले हेरेको खण्डमा मात्रै त्यो सिनेमा राम्रो मान्ने प्रचलनलाई क्रिटिक च्वाइस अवार्डले चुनौती दिन्छ । बक्स अफिसको नापोले भन्दा फरक मापनले हेर्नुपर्ने यसका पक्षधरको आग्रह छ । हाम्रोमा साहित्य, तर यस्ता पद्धतिप्रति सधैं उदासीन रह्यो । पचासौं साहित्यिक संस्था छन् । तिनले दर्जनौं सम्मान–पुरस्कार बर्सेनि वितरण गर्दै आएका छन्, तर कस्तो मूल्यांकन पद्धति प्रयोग गर्छन् ? रहस्यमयी छ । साहित्यले क्रिटिक च्वाइस अवार्डजस्तो मूल्याङ्कन पद्धतिको सिको गरेको भए साहित्यमा व्याप्त एकरसता विगतमै भत्किने थियो । उही बासी अनुहारको साम्राज्य अघि नै विस्थापित भइसक्थ्यो । कतिपय पुस्तकहरू छापाका हेडलाइनबाट ओर्लिसकेका हुन्थे ।
प्राज्ञिक क्षेत्रको उदाहरण त अझै र्‍याडिकल छ । फरक क्षेत्रका प्रयोग र प्रचलन छन् । सिक्नलाई जहाँबाट पनि सकिन्छ । राम्रा दर्जाका अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा अन्वेषण, अनुसन्धानसम्बन्धी लेख पठाएपछि सम्पादकले लेखकको पाण्डुलिपिलाई (म्यानुस्क्रिप्ट) रिभ्युअरकहाँ पठाउँछ । रिभ्युअरलाई लेखकबारे जानकारी दिइँदैन । लेखकलाई त रिभ्युअरबारे थाहा हुने सवालै भएन । दुवै पक्षलाई अनभिज्ञ बनाई गरिने यस समीक्षा पद्धतिलाई डबल ब्लाइन्ड भनिन्छ । मनोगत् मूल्याङ्कनलाई रत्तीभर ठाउँ नदिन यस्तो प्रबन्ध गरिएको हो । हाम्रा पुरस्कार गुठीले निर्णायकमण्डललाई लेखकबारे कुनै जानकारी नदिई पाठ मात्र वा अडियो दिएर मूल्यांकन गराउने हो भने निष्पक्षता आउने थियो । पाठको गुणवत्तामा सम्बन्धको बुई–चढी हट्ने थियो । समीक्षा कृतिगत हुनुपर्छ भनेको यही होइन र ? कहिले हामी यस्तो साहस जुटाउन सकौंला ?
समकालीन साहित्यमा कस्तो रोडम्याप आवश्यक हो ? अहिले कुनै रोडम्याप पनि छ वा छैन ? वा कुनै अनौपचारिक किन नहोस्, फ्रेमवर्क वा पद्धतिले काम गरिरहेको छ ? प्रश्न उभिन्छ । यी प्रश्नको जवाफ खोज्नुअगावै हामीले अहिलेसम्म प्रयोग गरेका रोडम्याप, फ्रेमवर्क, प्रवृत्ति वा पद्धति जे भनौं, त्यसले हामीलाई समग्रमा कहाँ पुर्‍यायो ? भन्ने प्रश्न बढी महत्त्वको छ । यसको विवेचना नगरी अगाडिको यात्रा कसरी थाल्ने ? भन्न कठिन छ । केही पक्षमा ध्यान दिँदा, त्यसले साहित्यलाई पक्कै टेवा दिनेछ ।
प्रथम, गुरुकुल स्कुलिङको धङधङी त्याग्ने । कुनै एक व्यक्तिलाई गुरु थापेर, त्यो परम्पराप्रति आज्ञाकारी बन्ने, अन्य ज्ञानपरम्परा (संकायहरू) प्रति अनदेखा गर्ने प्रवृत्तिलाई सच्याउने । नेपाल गज्जबको देश हो । यहाँ हिउँको मात्र होइन, विडम्बनाको पनि सगरमाथा छ । गुरुपूर्णिमामा सामाजिक सञ्जाल गुरुभक्तिले छपक्कै भरिन्छ । गुरुभक्तिमा हाम्रो शिर त्यसैत्यसै निहुरिन्छ । मेरो जीवनमा असलभन्दा खराब गुरु अधिक छन् । पढाउन मन नगर्ने, जवाफ गलत हुँदा झ्यापु लगाइहाल्ने, साहित्य पढेको थाहा पाउँदा विद्यार्थी बिग्रेको मान्ने, क्याम्पसकालमा परियोजनाको पछाडि दगुर्ने र जाँचअघि ह्यान्डआउट दिएर झारा टार्ने अनेकौं गुरु छन् । यस्ता खराब गुरु पनि गुरुपूर्णिमाको लहरमा हाम्रो उदारमनाको फाइदा लिँदै मिस्सिएकै छन् । खराब र असल छुट्याउन सक्नु पो उपलब्धि ! विद्याकी देवी सरस्वतीको भव्य पूजा यहीँ लाग्छ । तर विद्या, विज्ञान र प्रविधिमा हामी नै पछाडि ? केही पक्कै नमिलेको छ । भक्तिभाव र विज्ञान्विपरीत दिशाका यात्री हुन् । जति चाँडो यसमा हामी प्रस्ट हुन सक्यौं, त्यति नयाँ यात्रालाई बल पुग्छ ।
दोस्रो, स्वतन्त्र चिन्तनलाई सर्वोपरि मान्ने । भीडको सुरक्षा दीर्घकालीन हुँदैन भनेर बुझ्न अबेर नगर्ने । अप्रिय लागे पनि सत्य हो— बहस, परिमार्जन र उन्नत विचारको सोपान चढेर नै विचारको परिष्कार सम्भव हुन्छ । इतिहासको नजिर त्यस्तै छ । विज्ञानप्रविधिमा जस्तै सृजना क्षेत्रमा (सृजनामा झन् बढी कारण, यहाँ सृजनशीलता र नवीनताको अधिक अपेक्षा गरिन्छ) सृजनात्मक ध्वंसको (क्रियटिभ डिस्ट्रक्सन) नियम लागू हुन्छ । विचार र शैलीको नवीन गोरेटो जसले कोर्न सक्यो, हिँड्न सक्यो वा अग्रजको बाटोको सीमामा नबाँधिएर त्यसलाई फराकिलो बनाउन सक्यो, ट्रेन्ड उसैले बनाउने हो । प्रयोगधर्मिताको स्वीकार्यताले नै परम्परा बन्ने हो । तर, सफलताको जोखिम पनि छ । सफल भएपछि, लेखक उही विषयवस्तु वा शैलीलाई दोहोर्‍याउन खोज्छ । कन्फर्ट जोनबाट ऊ निस्कन सक्दैन वा चाहँदैन । कतिपय नाम चलेका लेखकमा पुनरावृत्तिदोष देख्न धामा गर्नु पर्दैन ।
स्वाभाविक मान्नुपर्छ, सचेत लेखकहरू आफ्नै सीमा र पूर्ववर्त्ती लेखकहरूले निर्माण गरेका सीमा नाघ्न चाहन्छन् । फरक पहिचानको खोजीमा लाग्छन् । अग्रजबाट धेरै प्रभावित नभई पृथक् बाटाको यात्री हुन चाहन्छन् । नवीन बाटो खन्न दुष्कर छ । कष्टसाध्य छ । तर, दुष्कर भएकैले सीमा भत्काउनु राम्रो होइन भन्ने निष्कर्ष सही ठहरिँदैन । हामीले अग्रज लेखकको घरको पर्खालमा घन बजार्ने भनेर कहाँ बुझेका छौं र ? बरु स्कुलमा कालोपाटीमा कोरिएको धर्कालाई नमेटीकन सानो कसरी बनाउने भन्ने प्रश्नमा छेवैमा त्यसभन्दा लामो धर्का कोर्ने अर्थमा सीमा भत्काउने संकथनलाई बुझौं ।
नयन दाइ ! अग्रजले कोरेको सीमा भत्काउनुस् भन्ने तपाईंको सुझावप्रति मेरो सहमति छ । आफ्ना सीमाहरू अनुज लेखकले सृजनात्मक ढंगले भत्काउँदा हर्षित बन्ने लेखकहरू नै वास्तवमा सम्मानका हकदार छन् । अघि जन्मेकैले, पुरस्कार पाएकैले, पुस्तक प्रकाशन गरेकैले र पाठ्यक्रममा रचना समाविष्ट भएकैले लेखकले सम्मान पाउनुपर्छ भन्नुको के अर्थ छ ? सम्मान् त आर्जन गर्ने कुरा हो । सम्मान कसैको अधिकार होइन । अपमान पो गर्नु भएन । म झन् एक कदम अघि गएर सोच्छु— कसैलाई म सम्मान गर्दिनँ, निरपेक्ष बस्छु भन्न पनि मिल्छ । त्यसले व्यक्तिको खराबपनबारे केही बताउँदैन । कसैलाई मन पराउने/नपराउने सन्दर्भमा, आफ्नो निर्णयलाई थाती राख्न मान्छे उत्तिकै स्वतन्त्र छ ।
प्रकाशित : भाद्र १२, २०७८ १२:२१